Olee otú iji tọghata / Ọkụ Torrent ka DVD on Mac / Win (Windows 8 gụnyere)
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata na Ọkụ Torrent Movies ka DVD na Mac / Win
Dị ka tọn ndị ọzọ, ma eleghị anya ị na-na-ọzọ na ndị ọzọ videos na fim iyi downloads na chọrọ ọkụ Torrent ka DVD ịmepụta ndabere ma ọ bụ na-enweta vidiyo na gị DVD ọkpụkpọ. Ma ọ bụ ma eleghị anya draịvụ ike gị bụ ama zuru nke ọtụtụ ikpọ iyi fim na ị chọrọ ọkụ ebudatara Torrent nkiri na DVD ka onwe ụfọdụ ohere. N'agbanyeghị ihe ọ bụla kpatara ya bụ, i nwere ike inwe ya mere na a DVD burner na-akwado ndị niile na-ewu ewu video formats.
Ọ bụ oké nhọrọ iji tọghata Torrent ka DVD na anyị bestselling iyi dvd burners, Video Converter Ultimate (Windows 8 na-akwado) na Video Converter Ultimate for Mac (Snow agụ owuru, odum, Mountain odum gụnyere). Dị ka ị ga-ahụ mgbe ị wụnye a free ikpe version, Video Converter Ultimate nwere ike ire ọ bụla video format ẹsịn na ya na àmụmà ọsọ. N'okpuru ebe ga-ewebata nzọụkwụ iji tọghata Torrent ka DVD na Windows, na nzọụkwụ nke na-ere ọkụ torrents ka DVD na Mac ndị fọrọ nke nta otu ihe ahụ. Ugbu a, ka ego ya.
Free download Torrent ka DVD burner:
Olee otú iji tọghata Torrent nkiri na DVD nzọụkwụ site nzọụkwụ:
1 Ibu Ibu Torrent fim
Ka malitere, pịa "Ọkụ"> "Tinye Files" button mbubata ebudatara Torrent videos. The dị videos ga-egosipụta na collections ebi ndụ, na onye ọ bụla video ga-apụta dị ka otu na akara ngosi na DVD menu. Nanị ịdọrọ na dobe ịgbanwe video iji. Videos nwere ike previewed na nri iji hụ ma na ị chọrọ dezie ha. Niile ewu uTorrent video formats na-akwado, gụnyere AVI, MKV, RMVB, MOV, RM, VOB, MP4, WMV, MOD, Tod, na ndị ọzọ.
2 Dezie Torrent videos (nhọrọ)
Nke a DVD ọkụ software na-agụnye video edezi ọrụ dị ka ubi, bugharia, tinye watermarks, ewepụtụ, na na. Right pịa video ị chọrọ dezie ma họrọ "Dezie" na-emeghe video edezi window n'okpuru.
3 Hazie DVD menus (nhọrọ)
Mgbe ị na-afọ ojuju na video iji na video àgwà, dị nnọọ pịa "Change Template" na-amalite DVD e kere eke ọkachamara. Họrọ otu si preset DVD menu ndebiri na nke a iyi DVD Onye Okike na mgbe ahụ hazie ya site na-agbanwe menu buttons, okpokolo agba, ndabere, thumbnails, wdg
I nwekwara ike iji ọkacha mmasị gị song na foto dị ka ndabere music na oyiyi. Isure a Torrent DVD enweghị menu, dị họrọ "Ọ dịghị NchNhr" na ikwu nke a nzọụkwụ.
4 Malite Torrent nkiri na DVD ọkụ
Kpọmkwem pịa Play bọtịnụ na DVD menu ka ịhụchalụ DVD. Gbaa mbọ hụ na ihe niile bụ ihe OK. Mgbe ị na-enwe obi ụtọ na N'ihi ya, kụrụ "Ọkụ" iji tọghata iyi nkiri na DVD. Na-ere ọkụ oge tumadi na-adabere na videos size na kọmputa gị ịrụ ọrụ. Mgbe ọkụ usoro zuru ezu, enwe ebudatara Torrent nkiri na gị DVD ọkpụkpọ na ala!
Ihe Ọmụma nkekọrịta: banyere iyi
Torrent bụ oké usoro maka nbudata na fim, egwú na ndị ọzọ na stof ị chọrọ n'aka a netwọk nke ọrụ na bụ nnọọ ewu ewu n'etiti ndị niile nkiri Fans. A iyi faịlụ nwere ike hụrụ ka a na ibe edokọbara na otu faịlụ na-echekwara na ike draịva nke ọtụtụ ọrụ gburugburu ụwa. Anwala ọkụ Torrent faịlụ ka DVD. Na-agaghị arụ ọrụ. Ị mkpa a Torrent ahịa dị ka uTorrent ibudata nkiri mbụ na mgbe na-eji a Torrent DVD Onye Okike ngwa ọkụ nke nkiri ka DVD diski maka play on TV. Na-ewu ewu Torrent saịtị na-agụnye The Paireti Bay, Torrentz, BTjunkie, Demonoid.me, Fenopy, Isohunt, BitTorrent, uTorrent, Vuze, LimeWire, eMule, Ares, FrostWire na BitComet. wdg
Olee otú ọkụ ka iDVD enweghị menu / isiokwu
Blu-ray Audio Formats Kọwaa